သူ့အခဈြတှကေ ဖွူမှ မဖွူစငျခဲ့တာ ဝေးရတယျဆိုတာ ဆနျးတာတော့ မဆနျးပါဘူး … – Shinyoon
သူ့အခဈြတှကေ ဖွူမှ မဖွူစငျခဲ့တာ ဝေးရတယျဆိုတာ ဆနျးတာတော့ မဆနျးပါဘူး …
May 23, 2021 by Shin Yoon
မကျြနှာဖုံးတှသေုံးပွီး ခဈြယောငျဆောငျခဲ့တာကို တကယျခဈြတယျအထငျနဲ့ မြှျောလငျ့နမေိတဲ့သူကပဲ မှားတာပါတဲ့ … အခြိနျတှကွောလာလို့ အရငျလို မဟုတျတော့တဲ့အခါ ပွောငျးလဲသှားလိုကျတာလို့ပဲ သတျမှတျခဲ့မိတယျ တကယျတမျးကတြော့ အရငျကတညျးကနေ မခဈြခဲ့တာပါ ။ ခုတော့ ဆကျပွီး ဟနျဆောငျမနနေိုငျတော့တာလေ ။
အစကတညျးက မဖွူစငျခဲ့မှတော့ ခရီးတှေ အဆုံးထိမရောကျခဲ့တာ ဆနျးတာတော့ မဆနျးပါဘူးလေ ကိုယျ့ဘကျက စဈမှနျခဲ့ရငျ အစဈအမှနျတှပေဲ ပွနျရလာလိမျ့မယျဆိုတဲ့ တုံ့ပွနျမှုတှကေိုလဲ မယုံတော့ပါဘူး အရငျကတော့ တဈနကေ့ရြငျတော့ ပွနျရလာမှာဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ မြှျောဖွဈသေးတယျ အခုတော့ ကိုယျစဈမှနျရဲ့နဲ့ တဈဖကျက မဖွူစငျတဲ့အခါ ဒီလူနဲ့ ဝဋျကွှေးဆုံလို့ ကွုံရတယျလို့ပဲ ကိုယျ့ကိုယျကို ဖွသေိမျ့လိုကျတယျ …
ခဈြတယျဆိုတဲ့စကားတှဟော အရငျကတော့ သိပျကို ကွညျနူးစရာကောငျးတယျ ဒါပမေယျ့ ခုတော့ ရငျထဲကမပါမှနျးသိတော့ ကနြေပျစရာမကောငျးတော့ဘူး … တကယျမဟုတျမှနျးသိသိနဲ့ နားထောငျလို့ကောငျးတာဆိုလို့ အဖှားပွောတဲ့ ပုံပွငျတှပေဲရှိတာလေ … အခဈြဆိုတဲ့အရာမှာ အလိမျအညာတှပေါလာရငျ အဆငျမပွတေော့ဘူး ။
တဈသကျလုံး ဒီလကျနဲ့ မွဲခငျြတယျလို့တော့ တှေးခဲ့တာပဲ … ဒီတဈယောကျတညျးကိုပဲ ပုံခဈြမယျလို့လဲ ရညျရှယျခဲ့တာပါပဲ … ဒါပမေယျ့ သူ့အခဈြက အလိမျအညာသိပျမြားလှနျးတယျ သကာစမျးထားတဲ့ စကားတှကွေားမှာ ကိုယျလဲ အခြိနျအကွာကွီး ရူးခဲ့ဖူးပွီပဲလေ .. နောကျဆုံးကတော့ … ကိုယျမြှျောလငျ့ထားသလို ပြျောရှငျစှာ ပေါငျးဖကျကွလသေတညျးဆိုတာနဲ့ အဆုံးမသတျခဲ့ပါဘူး ။
အစကတညျးကမှ မဖွူစငျခဲ့တာ အဆုံးသတျတှေ မကောငျးတာတော့ ဆနျးတာတော့ မဆနျးပါဘူးလေ …. ဒါပမေယျ့ အဲ့လို လိမျညာခဲ့တဲ့သူကို မမေ့ရသေးတာတော့ သိပျကို ဆနျးတယျ ။
သူ့အချစ်တွေက ဖြူမှ မဖြူစင်ခဲ့တာ ဝေးရတယ်ဆိုတာ ဆန်းတာတော့ မဆန်းပါဘူး …
မျက်နှာဖုံးတွေသုံးပြီး ချစ်ယောင်ဆောင်ခဲ့တာကို တကယ်ချစ်တယ်အထင်နဲ့ မျှော်လင့်နေမိတဲ့သူကပဲ မှားတာပါတဲ့ … အချိန်တွေကြာလာလို့ အရင်လို မဟုတ်တော့တဲ့အခါ ပြောင်းလဲသွားလိုက်တာလို့ပဲ သတ်မှတ်ခဲ့မိတယ် တကယ်တမ်းကျတော့ အရင်ကတည်းကနေ မချစ်ခဲ့တာပါ ။ ခုတော့ ဆက်ပြီး ဟန်ဆောင်မနေနိုင်တော့တာလေ ။
အစကတည်းက မဖြူစင်ခဲ့မှတော့ ခရီးတွေ အဆုံးထိမရောက်ခဲ့တာ ဆန်းတာတော့ မဆန်းပါဘူးလေ ကိုယ့်ဘက်က စစ်မှန်ခဲ့ရင် အစစ်အမှန်တွေပဲ ပြန်ရလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကိုလဲ မယုံတော့ပါဘူး အရင်ကတော့ တစ်နေ့ကျရင်တော့ ပြန်ရလာမှာဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ မျှော်ဖြစ်သေးတယ် အခုတော့ ကိုယ်စစ်မှန်ရဲ့နဲ့ တစ်ဖက်က မဖြူစင်တဲ့အခါ ဒီလူနဲ့ ၀ဋ်ကြွေးဆုံလို့ ကြုံရတယ်လို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြေသိမ့်လိုက်တယ် …
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေဟာ အရင်ကတော့ သိပ်ကို ကြည်နူးစရာကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် ခုတော့ ရင်ထဲကမပါမှန်းသိတော့ ကျေနပ်စရာမကောင်းတော့ဘူး … တကယ်မဟုတ်မှန်းသိသိနဲ့ နားထောင်လို့ကောင်းတာဆိုလို့ အဖွားပြောတဲ့ ပုံပြင်တွေပဲရှိတာလေ … အချစ်ဆိုတဲ့အရာမှာ အလိမ်အညာတွေပါလာရင် အဆင်မပြေတော့ဘူး ။
တစ်သက်လုံး ဒီလက်နဲ့ မြဲချင်တယ်လို့တော့ တွေးခဲ့တာပဲ … ဒီတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ပုံချစ်မယ်လို့လဲ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါပဲ … ဒါပေမယ့် သူ့အချစ်က အလိမ်အညာသိပ်များလွန်းတယ် သကာစမ်းထားတဲ့ စကားတွေကြားမှာ ကိုယ်လဲ အချိန်အကြာကြီး ရူးခဲ့ဖူးပြီပဲလေ .. နောက်ဆုံးကတော့ … ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလို ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းဖက်ကြလေသတည်းဆိုတာနဲ့ အဆုံးမသတ်ခဲ့ပါဘူး ။
အစကတည်းကမှ မဖြူစင်ခဲ့တာ အဆုံးသတ်တွေ မကောင်းတာတော့ ဆန်းတာတော့ မဆန်းပါဘူးလေ …. ဒါပေမယ့် အဲ့လို လိမ်ညာခဲ့တဲ့သူကို မေ့မရသေးတာတော့ သိပ်ကို ဆန်းတယ် ။
ဒါတှေ ဘယျသူမှ မသိပါဘူး …